परीक्षा केन्द्रमा ब्रिजकोर्स आतंक | Educationpati.com
परीक्षा केन्द्रमा ब्रिजकोर्स आतंक
२०७३ चैत्र ७ गते २३:४२मा प्रकाशित
काठमाडौं । पुतलीसडकस्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयबाट सेकेन्डरी एजुकेसन इक्जामिनेसन (एसईई) को परीक्षा दिएर निस्केकी सरिता सिलवाललाई ब्रिजकोर्स प्रदायक संस्था बताउने एक कम्पनीका प्रतिनिधिले हातमा ब्रोसर थमाउँदै भने, 'कक्षा ११ कहाँ भर्ना गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ? हामी तपाईलाईं भर्ना गर्नुअघि आवश्यक पर्ने ब्रिजकोर्स सिकाउँछौं । तपाईंलाई भर्नाको समयमा छुट पनि दिलाइदिन्छौं ।'
परीक्षा सुरु भएको पहिलो दिन नै ब्रिजकोर्सको नाममा यस्तो अफर आएपछि सरिता छक्क परिन् । नतिजा आउने कहिले रु नतिजा कस्तो आउँछ ? केही पत्तो छैन । त्यसैमाथि कक्षा ११ मा भर्ना गर्ने बेलामा सहयोगसमेत गर्ने रे । सरिताले ब्रिजकोर्स सञ्चालकको अफरबारे घरमा आमालाई सुनाइन् । गत वर्ष भाइ रामहरिले एसएलसी दिएको बेलामा पनि यस्तै अफर गर्ने ब्रिजकोर्स प्रदायक संस्थाको लहैलहैमा लाग्दा १० हजार रुपैयाँ बेकारमा खेर गएको आमाले बताएपछि सरिताले बुझिन्, ब्रिजकोर्सको वास्तविकता र आफूलाई पद्मोदयको गेटैमा गरिएको अफर ।
सरिताजस्ता थुप्रै परीक्षार्थी अहिले ब्रिजकोर्सको नाममा परीक्षा केन्द्रमै गएर विद्यार्थीलाई गरिने विभिन्न अफरबाट वाक्क भएका छन् । विद्यार्थीको भीडमा ब्रिजकोर्सको नाममा प्रचारप्रसार गर्न आउनेहरूले परीक्षार्थीलाई अर्को सास्ती थपिदिने गरेको छ । सरिता भन्छिन्, 'हरेक दिन परीक्षा दिएर घर फर्कने क्रममा फरकफरक कम्पनीले यस्तो अफर गर्छन् । परीक्षा अवधिभर त ढुक्कसँग पढ्न दिनु नि ।' एम्बिसन एकेडेमीका कार्यकारी निर्देशक देवीप्रसाद घिमिरे पनि ब्रिजकोर्सको नाममा विद्यार्थीलाई दिइने सास्ती अस्वाभाविक भएको बताउँछन् । 'पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरेर विद्यार्थी बोलाउनु स्वाभाविक हो । तर परीक्षा केन्द्रमै गएर विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिनु ब्रिजकोर्स सञ्चालकको गैरजिम्मेवारीपन हो' घिमिरे भन्छन्, 'यो विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पर्ने षड्यन्त्र हो । यस्तालाई अपराधीसरह कारबाही गर्नुपर्छ ।'
अहिले राजधानीका परीक्षा केन्द्र वरिपरि इन्स्टिच्युट र कलेज, ब्रिजकोर्स सञ्चालकहरूको प्रचार सामग्री ब्रोसर बाँड्नेहरूको लर्को देखिन्छ । हरेकजसो परीक्षा केन्द्रमा यस्तो संस्थाको प्रतिनिधि चाङका चाङ ब्रोसरहरू बोकेर बसिरहेको भेटिन्छन् । यस्ता संस्थाहरूले परीक्षापछि फुर्सदमा हुने विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न भाषाका तालिम, कम्प्युटर कक्षा, कक्षा ११ मा पढाइ हुने विज्ञान, व्यवस्थापन, नर्सिङलगायतका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने बताउने गरेका छन् । अहिले परीक्षा केन्द्रमा जम्मा भएका ब्रिजकोर्स सञ्चालकले विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकका सम्पर्क नम्बर लैजाने गरेका छन् । जुन नम्बरको आधारमा उनीहरूले विद्यार्थीलाई परीक्षा सकिनेबित्तिकै फोन गरेर हैरानीमा समेत पार्ने गरेका छन् ।
'परीक्षा सकाएर केही दिन पनि फुर्सदमा बस्न नपाउँदै यस्ता इन्स्टिच्युटबाट आउने फोनले विद्यार्थीलाई मात्र होइन, अभिभावकलाई समेत तनाव दिन्छन्' अभिभावक कृष्ण पौडेल भन्छन्, 'ब्रिजकोर्स लिन चाहने विद्यार्थीलाई यसरी अनावश्यक रूपमा फोन गरेर बोलाइरहनु पर्दैन । आफैं संस्था खोज्दै जान्छन् । यस्ता सञ्चालकलाई परीक्षा केन्द्रको निश्चित दूरीभन्दा भित्र जान नदिने नियम बनाउन सकिएमा यस्ता तनावबाट केही मुक्ति पाइन्छ ।' यसरी विद्यार्थी आकर्षण गर्दै प्रचारप्रसारमा जुटेका ब्रिजकोर्स सञ्चालकहरूमध्ये अधिकांशले कानुनी मान्यतासमेत लिएका हुँदैनन् । एउटा सामान्य कोठा भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर ठूलठूला प्रचारप्रसार गरेर घर नै भाडामा लिएका संस्थाहरूले समेत ब्रिजकोर्स सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, 'कानुनी रूपमा संस्था सञ्चालन गर्न कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । तर मौसमी रूपमा खुलेका यस्ता संस्थालाई अनुगमन गर्नसमेत कठिन छ । जसको मार अभिभावक र विद्यार्थीले समेत खेप्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा कुन कम्पनी राम्रो हो भनेर जान्नका लागि विद्यार्थी र अभिभावक आफैंले अध्ययन गर्नु राम्रो हुन्छ ।'
विद्यालय तहको संरचना परिवर्तन भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक बिहीबारदखि सेकेन्डरी एजुकेसन इक्जामिनेसन ९एसईई० को नामबाट कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । १० महिनाअघि संशोधन भएको शिक्षा ऐनले कक्षा १० सम्ममात्र रहेको विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गरेर कक्षा १२ सम्म पुर्याएको थियो ।
परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीका अनुसार यस वर्ष परीक्षामा सामान्य धारका पाँच लाख ३८ हजार एक सय ८२ जना परीक्षार्थी सहभागी छन् । प्राविधिक धारका तीन हजार सात सय तीनजना सहभागी हुनेछन् । सामान्य धारको परीक्षा चैत ११ गतेसम्म तथा प्राविधिक धारका विषयका परीक्षा चैत १४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । परीक्षाका लागि मुलुकभर एक हजार नौ सय २३ वटा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । गत वर्ष एक हजार नौ सय ४३ केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो ।
यस पटक परीक्षा सञ्चालनका लागि एक हजार नौ सय २३ केन्द्राध्यक्ष, दुई हजार ६ सय ४६ सहायक केन्द्राध्यक्ष, २२ हजार चार सय ६१ निरीक्षक, ११ हजार सात सय १६ जना सहयागी र २८ हजार आठ सय ४५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । परीक्षाको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा १८ वटा समिति गठन गरेर अनुगमन गरिरहेको छ । अन्नपुर्णपोष्टमा खबर छ ।